<img N'ezie = ”wp-image-136 alignleft“ src = “https://traffictoaffiliate.com/wp-content/uploads/2019/09/socail.jpg” alt = ”” size = ”114 ″ elevation =“ 113 ”/> Social Media n'ihi na ọtụtụ obere ụlọ ọrụ bụ a na-eri-oru oma mgbasa ozi ngwaọrụ nke nwere ike inyere mụbaa mmadụ ụghalaahia aha nkwenye, na-akara na ntanetị na ndị ahịa nkwa. Ọ bụghị mkpọtụ ma ọ bụ ndozi-ọsọ ma kwa uche nke anyị ji agakwuru ya ga-emetụta ọganiihu anyị ma ọ bụ ọdịda anyị.
Ebe netwọkụ mmekọrịta na-eru nso n’otu arịa ọbara dịka usoro mgbasa ozi na-ahụkarị, chee akwụkwọ yana mgbasa ozi mgbasa ozi, akara ngosi na ihe ndị ọzọ, ọ ga-ada ada. Mediadị mgbasa ozi dabara na usoro mgbasa ozi na ịzụ ahịa anyị, mana ọ bụghị atụmatụ anyị kwesịrị iji mgbe anyị na -ekọrịta na saịtị mgbasa ozi.
Netwọk mmekọrịta na-akpọ oku maka mgbanwe mgbanwe n'ụdị anyị chere na iru nke anyị lekwasịrị ahịa. Kama inye ma na-agwa, enyemaka ya yana ịnye uru - yana ọ bụ ihe niile gbasara ahịa anyị.
Tọ ntọala maka ihe ịga nke ọma na mgbasa ozi mmekọrịta nwere ike ịdị mgbagwoju anya yana nghọtahie dabara adaba. N'oge gara aga, nke a nwere ike ịpụtala mgbasa ozi Facebook dị aghụghọ, nke na-enweghị njikọ na nzukọ anyị ma na-etinyekwa uche na ndị na-ege anyị ntị, mepụtara iji nweta ndị mmadụ ga-amasị Facebook Page yana ịkwalite ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ anyị.
Ọtụtụ mgbe ọnụọgụ ndị na-eso / ndị na-eso ụzọ ndị a na-anọchi anya ndị mmadụ n'akụkụ ndị ọzọ dị iche iche nke ụwa na-enweghị agụụ ọ bụla na ngwọta anyị yana ihe, ọ bụghị ịkpọtụrụ ọdịnaya weebụ anyị na-ebipụta n'ịntanetị. Hey, ọ dị ka ọ dị mma. Ka oge na-aga nakwa ka saịtị mgbasa ozi mmekọrịta na-eto eto, ọtụtụ n'ime anyị achọpụtala n'ezie na ndị a 'zụtara' Fans na ndị na-eso ụzọ enweghị isi ma ọ bụrụ na ọ metụtara ịzụlite aha akara ntanetị yana ụlọ ọrụ anyị.
Mgbe i lere anya na netwọkụ mgbasa ozi mmekọrịta nke ga-arụ ọrụ kachasị mma maka ụlọ ọrụ gị, buru n'uche ụkpụrụ "obere ihe dị ọtụtụ karịa". Ọ bụ ezie na ụfọdụ ọrụ nwere isi mmalite (ndị mmadụ n'otu n'otu, oge, ego) iji mee ọtụtụ mgbasa ozi mmekọrịta ọhaneze, ọtụtụ ụlọ ọrụ pere mpe enweghị. Ọ ka mma ịhọrọ ọtụtụ netwọkụ dị oke mkpa maka ụlọ ọrụ gị, yana ijikwa ha nke ọma, karịa ịnwa ịnọnyere ọtụtụ azụmahịa dị iche iche, yana ijikwa ha nke ọma.
Saịtị soshal midia site Sue Cockburn
Tọ ntọala maka ihe ịga nke ọma na mgbasa ozi mmekọrịta nwere ike ịbụ ihe mgbagwoju anya yana akọwahie ya ngwa ngwa. N'oge gara aga, nke a nwere ike igosipụta mgbasa ozi Facebook dị aghụghọ, nke na-enweghị njikọ na ụlọ ọrụ anyị yana nke na-etinyeghị uche na ndị na-ege anyị ntị, kere iji nweta ndị mmadụ ga-amasị Facebook Page yana ịkwalite ọnụ ọgụgụ ndị na-eso anyị. Ka oge na-aga yana ka mgbasa ozi mmekọrịta na-eto eto, ọtụtụ n'ime anyị achọpụtala n'ezie na ndị a 'enwetara' Fans na ndị na-eso ụzọ enweghị isi mgbe ọ bịara n'ịrụpụta aha aha anyị na ụlọ ọrụ anyị.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ọrụ nwere isi mmalite (ndị mmadụ n'otu n'otu, oge, ego) iji lekọta ọtụtụ netwọkụ mmekọrịta, ọtụtụ ọrụ ndị pere mpe enweghị. Ọ ka nnọọ mma ịhọrọ otu ụzọ netwọkụ dị oke mkpa karịa maka nzukọ gị, ma jikwa ha nke ọma, karịa ịnwa ịnọnyere ọtụtụ azụmahịa dị iche iche, ma jikwa ha aka ọjọọ.